DG Puntland & Galmudug oo iska kaashanaya Amniga & Sarifka.
Kenya welcomes the file by way of fact-finding challenge on
Somalia threatens to depart East African nations
France and Mali fortify their cooperation in
Kenya diyaar ma u tahay inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya? – Axadle
Mas’uuliyiinta Gobolka Mudug ee DG Puntland & Galmudug oo ay wehliyaan maamulka Magaalada Gaalkacyo oo Koofur & Waqooyi ugu kala qaybsan labada Dowlad Goboleed ayaa fadhi ka yeeshay arrimo kasoo kordhay Gobolkaas.
Waxyaabaha miiska saaran oo ay is tusiyeen mas’uuliyiinta Puntland & Galmudug waxaa kamid ah: Sugidda Amniga oo muhiim u ah xasiloonida Gobolka, Sarifka lacagta oo sare kac qiimaha Maciishadda Sababay & la dagaalanka ka gacansiga Walxaha maanka dooriya.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee dhanka DG Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare ayaa sheegay in dhammaan qodobada lasoo bandhigay wax laga qabanayo, isla markaana ay awood gelinayaan labada Dowlad Goboleed.
Kenya diyaar ma u tahay inay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya?…
Sanyare ayaa sheegay in sababta ammaanka loosoo hadal qaaday ay qayb ka tahay dhaq-dhaqaaqyada Al-Shabaab iyo diyaargarowga Doorashada dalka oo mas’uuliyadda ugu weyn ay ku dhaceyso Hay’addaha amniga.
Dhanka Safirka waxa uu u digay shaqsiyaadka ka faaiideysanaya isbadalka maaliyadeed, waxaana uu soo jeediyay in aan dadka lagu qiima kordhin maciishadda gaar ahaan quutul-duruuriga, maadaama qoysaska danta yar dhibaatada ugu weyn ee ka dhalata sare u kaca saameynta ugu badan ku reebeyso.
Dowlad Goboleedyada Puntland & Galmudug oo Koofurta iyo Waqooyiga Gaalkacyo kala maamulo ayaa marar badan sameeyay howlgalo ay iska kaashadeen wax ka qabashada isku dhaca Maleeshiyo Beeleedyada, la dagaalanka Walxaha maanka-dooriya & kuwo kale.
axadle 6374 posts
Ololaha madaxtinimo ee Shariif Sheekh Axmed oo ka billowday
political resilience among Congolese employers